बच्चाहरूमा रोजोला: निदान र उपचारको लागि अभिभावकको गाइड - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल प्रेस चेकआउट समुदाय, कल्याण समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन खेलहरु कम्पनी कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> रोजोला भनेको के हो? तपाईं यसलाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ?
रोजोला भनेको के हो? | लक्षण | निदान | उपचार | रोकथाम
रोजोला पहिलो बिमारी थियो जुन मैले नयाँ आमा बुबाको रूपमा अनौंठो सुँघ्ने पछाडि सामना गरें। मेरो तेह्र महिनाको छोराले दिउँसो अचानक ज्वरो ल्यायो, तर अन्यथा एकदम राम्रो देखिन्थ्यो। यो दाग देखा पर्नुभन्दा केही दिन अघि हुनेछ र हामीले बुझे कि ज्वरो डरलाग्दो थियो, यो खतरनाक थिएन। ज्वरोको कारण एक सामान्य र सामान्यतया हानिरहित बाल्यावस्थाको बिमारी थियोः गुलाबोला।
रोजोला भनेको के हो?
रोजोला (कहिलेकाँही बच्चामा छैठो रोग वा गुलाबोला इन्फन्टम पनि भनिन्छ) बाल्यावस्थामा सामान्य बिमारी हो जुन उच्चले चित्रण गर्छ। ज्वरो रगत पछि धेरै बालबालिका रोण्डोलाबाट संक्रमित भइसकेका छन् जब किन्डरगार्टन सुरु हुन्छन्, एमडी, सोमा मण्डल भन्छन्, बोर्डका प्रमाणित इन्टर्निस्ट शिखर सम्मेलन मेडिकल समूह बर्कले हाइट्स, न्यु जर्सीमा।
रोजोला बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि संक्रामक हो, तर किनभने धेरै मानिसहरूले यसलाई बाल्यकालमा अनुभव गर्छन् र प्रतिरक्षा प्राप्त गर्दछन्, वयस्कहरूले यसलाई समात्ने काम विरलै हुन्छ।
रोजोला बिभिन्न भाइरसको कारणले हुन सक्छ, तर सबैभन्दा सामान्य कारण मानव हर्पेस भाइरस called भनिने भाइरस हो, डा। मण्डल भन्छन्। सामान्यतया, यो भाइरसको एसिम्प्टोमेटिक शेडिंगबाट नजिकको सम्पर्कको स्रावमा देखा पर्दछ। अर्को, कम सामान्य, भाइरस जसले गुलाबोला निम्त्याउन सक्छ मानव हर्पेस वायरस is हो।
रोजोला सामान्यतया देखा पर्दछ २ भन्दा मुनिका बच्चाहरू र सबैभन्दा संक्रामक हुन्छन् जबकि बच्चालाई तीनदेखि पाँच दिनसम्म ज्वरो आउँछ, दाग देखा पर्नु अघि। यद्यपि दादुरा, रुबेला, फिफथ रोग (पार्भोभायरस), र रोसोला सबै रसासहित उपस्थित छन्, ती एक अर्काबाट फरक रोगहरू हुन्।
रोजोला बिरामीले फैलिन्छ जब संक्रमित व्यक्ति बोल्छ, खोक्रा वा छींक लाग्दछ र त्यसपछि यो संक्रमण हुने श्लेष्म झिल्ली (आँखा, नाक, र मुख) मा पुग्छ, डाक्टरका योगदानकर्ता एमडी लेन पोष्टन भन्छन्। आइकन स्वास्थ्य ।
रोजोला गम्भीर गम्भीर छ। कहिलेकाँही, तेज बृद्धि भएको उच्च ज्वरोह एक febrile दौरा वा एसेप्टिक मेनिन्जाइटिस पैदा गर्न सक्छ, जो समाधान हुनेछ। यद्यपि यो दौरा आमा बुबाको लागि डरलाग्दो छ, तिनीहरू विरलै गम्भीर छन् र मिर्गी वा अन्य जबरजस्ती विकारहरूसँग सम्बन्धित छैनन्। फेब्रियल दौरा लगभग मा हुन्छन् १०% देखि १%% साना बच्चाहरू जोसँग रोसोला छ।
केही व्यक्तिहरूमा, संक्रमण धेरै कम लक्षणहरू भएको कारण गर्दछ, डा। पोष्टन भन्छन्। जो लाक्षणिक हो, लक्षणहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ :
एक उच्च ज्वरो (सामान्यतया १०१ डिग्री एफ र १० degrees डिग्री एफ बीचमा) जुन अकस्मात अचानक आउँदछ, तीनदेखि पाँच दिनसम्म चलिरहन्छ, त्यसपछि अचानक हट्छ। केही बच्चाहरूको ज्वरो आनु भन्दा पहिले नाक, खोकी, वा घाँटी दुखेको हुन्छ।
एउटा गुलाबी-रातो दाग कि हुनसक्छ बिरालो बढ्न सक्छ जुन ज्वरो गए पछि देखा पर्ने छ (१२ देखि २ hours घण्टा पछि)। दाग ट्रंकमा शुरू हुन्छ र घाँटी, पाखुरा, खुट्टा, मुख, र अनुहारमा फैलिन्छ। पुराना दाग रहन्छ एक देखि तीन दिन , वा को लागी केही घण्टा ।
कती ibuprofen म २४ घण्टा मा लिन सक्छु
रोजोला रेशमा सामान्यतया निम्न विशेषताहरू हुन्छन्:
सपाट वा उठाएको हुन सक्छ
ट्रंकमा सुरू हुन्छ र सामान्यतया अन्य क्षेत्रमा सर्छ
छोएपछि दागहरू सेतो हुन्छन्
व्यक्तिगत स्पटको चारैतिर हल्का हेलो हुन सक्छ
केहि घण्टा देखि केहि दिन सम्म रहन्छ
गुलाबोलाका केहि बच्चाहरू सामान्य रूपमा व्यवहार गर्दछन् र उच्च तापक्रमको बाबजुद पनि राम्रो देखिन्छन्। अधिकांश बच्चाहरू रडाहरू देखा पर्ने बित्तिकै राम्रो महसुस गर्छन्। अन्य लक्षणहरूले समावेश गर्दछ:
फुलेको लिम्फ नोड्स, विशेष गरी टाउको वा घाँटीमा
महत्त्वपूर्ण नोट: र्यासको वर्णन प्राय: ती हल्का छालामा कसरी हेर्छन् भन्ने विशेषताद्वारा वर्णन गरिन्छ। गाढा छालामा छालाको अवस्था फरक देखिन सक्छ। रेशहरूको फोटोहरू दुबै अनलाइन र उपलब्ध छन् चिकित्सा स्कूलहरूमा हल्का छालामा दाग देखाउँछन्। थप अनुसन्धान र संसाधनहरू आवश्यक छन् आमाबुवा र स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरूले यी खरायोहरू कालो छालामा कस्तो देखिन्छन् भनेर पहिचान गर्न।
गुलाबला कसरी निदान गरिन्छ?
रोजोला लक्षणको आधारमा निदान गरिन्छ। किनकि गुलाबलाका लक्षणहरू अन्य रोगहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, त्यसैले परिवार स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा बाल रोग विशेषज्ञबाट उचित निदान गर्नु राम्रो विचार हो।
२ hours घण्टा भित्र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हेर्नुहोस् यदि:
ज्वरो फिर्ता आउँछ।
दाग खराब हुन्छ।
तपाई सोचानुहुन्छ बच्चा जाँच गर्न आवश्यक छ, तर यो जरुरी छैन।
एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तुरून्त हेर्नुहोस् यदि:
छालामा ठूला छालाहरू छन्।
बच्चा धेरै बिरामी देखिन्छ वा कार्य गर्दछ।
तपाइँ लाग्छ कि बच्चालाई जाँच गर्न आवश्यक छ, र यो जरुरी छ।
11 ११ मा तुरुन्त कल गर्नुहोस् यदि:
दाग बैजनी र रगतको साथ ज्वरो हुन्छ।
तपाईलाई लाग्छ तपाईको बच्चाको जीवनलाई जोखिममा पार्ने आपतकालिन छ।
बच्चाहरूमा कसरी रोजोला उपचार गर्ने
धेरै जसो केसहरूमा, रोजोला आफैले समाधान गर्नेछ र कुनै उपचार छैन, तर त्यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो बच्चालाई राम्रो महसुस गराउन सक्नुहुन्छ। गुलाबोलाको लागि उपचार अन्य भाइरसहरूबाट उच्च फियर्सको लागि जस्तै छ। यसले समावेश गर्न सक्छ:
ज्वरोलाई कम गर्ने औषधी जस्तै एसिटामिनोफेन ( Tylenol ) वा आइबुप्रोफेन ( सल्लाह / मोट्रिन )। Months महिना भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई आइबुप्रोफेन नदिनुहोस् जबसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सल्लाह दिदैन। बच्चाहरूलाई कहिल्यै एस्पिरिन नदिनुहोस् किनकि यो भाइरस बिरामीको साथ जोडीएको खण्डमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
बच्चालाई हल्का पोशाकमा लगाउनुहोस्।
बच्चालाई स्तनको दुध, फार्मूला, पानी, पपसिलहरू, पेडियालाइट , र अन्य स्पष्ट तरलहरू।
छैन हिउँमा चिसो वा चिसो स्नानको साथ ज्वरोलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र रक्सी रब्सको प्रयोग कहिल्यै नगर्नुहोस्। यो अप्रभावी र खतरनाक छ।
एन्टिबायोटिक्सले रोजोलाका लागि काम गर्ने छैन किनकि यो एक भाइरल संक्रमण हो, ब्याक्टेरियाहरूले गर्दा भएको होईन। दुर्लभ मामिलाहरूमा, antivirals , जस्तै फोस्कारनेट वा ganciclovir गुलाबोला भएका बच्चाहरूलाई सिफारिश गर्न सकिन्छ यदि उनीहरूले प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाएको छ। यी औषधी उमेर र तौल द्वारा dosed छन्, र एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक को निरीक्षण मा दिनु पर्छ।
हो, सानो TLC (कोमल मायालु देखभाल) लामो यात्रा गर्छ जब सानाले राम्रो महसुस गर्दैनन्। बच्चालाई आराम गर्न दिनुहोस्, र उनीहरूलाई यकीन महसुस भएमा धेरै आश्वासन दिनुहोस्। रोगहरूको कारणले ज्वरो संक्रामक हुन सक्छ, तपाईंको बच्चालाई अरू बच्चाहरूबाट टाढा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ, कम्तिमा तपाईंले उसको वा उनको प्रदायकसँग हस्ताक्षर नगरेसम्म। एक पटक ज्वरो २ 24 घण्टा बितिसकेपछि पनि दाग देखा परे पनि, तपाईंको बच्चा बच्चाको हेरचाह वा प्रीस्कूलमा फर्किन सक्छ, र अन्य बच्चाहरूसँग सामान्य सम्पर्क पुनः सुरु गर्न सक्दछ। तपाईंको प्रदायकले तपाईंको बच्चा स्कूलमा फर्कनको लागि नोट लेख्न आवश्यक पर्दछ।
अधिकांश व्यक्तिहरू एक भन्दा बढी पटक गुलाबोला हुँदैनन्। कुखुरा पोक्स र अन्य हर्पिस परिवार भाइरस जस्तै, HHV-6 र HHV-7 भाइरस जीवन को लागी प्रणाली मा रहन। जब तिनीहरू सामान्यतया सुस्त रहन्छन्, तिनीहरू पुन: देखा पर्न सक्छन् र ज्वरो र संक्रमण फोक्सो वा मस्तिष्कमा संक्रमण गर्न सक्छन् यदि एक व्यक्तिको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भयो भने (रोग वा औषधि मार्फत), तर यो धेरै विरलै छ।
आधारभूत राम्रा स्वच्छता ब्यबहार जस्तै हात धुने, स्निज र खोकीलाई ढाक्ने, र स्वस्थ बच्चाहरूलाई संक्रमित बच्चाहरूबाट टाढा राख्नु बाहेक रोसोला रोक्न कुनै ज्ञात तरीका छैन। त्यहाँ छैन खोप रोजोलाका लागि।
जबकि रोसोला धेरै सामान्य हो र प्राय जसो बच्चाहरूले यसलाई सम्झौता गर्छन्, यसले आमाबुवालाई सान्त्वना दिन्छ कि यो सामान्यतया हानिरहित हो र यो आफै जान्छ।
Irbesartan vs Valsartan: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
bupropion hcl xl १५० मिलीग्राम धूम्रपान को लागी
टाढा टाढा तपाइँ tylenol र एडविल लिन सक्नुहुन्छ
सेक्स पछि कति घण्टा योजनाbकाम गर्दछ
म मात्र राती खोकी किन?
कसरी छिटो प्राकृतिक रक्तचाप कम गर्न को लागी
मैले कति मेलाटोनिन मिलीग्राम लिनु पर्छ?